Shuruudo Lagu Soo Rogay Dadka Qabanaaya xilalka gobolada Soomaalida Itoobiya | Raadgoob
Shuruudo Lagu Soo Rogay Dadka Qabanaaya xilalka gobolada Soomaalida Itoobiya
Buuxinta xilalka maamulada gobolada iyo degmooyiinka
Markii ay meesha ka baxday dowladdii Cabdi Maxamuud Cumar waxaa gabi ahaanba meesha ka baxay maamuladii dagmooyiinka iyo goboladda.
” Iyada oo ay dowladda jirto toddobaad oo kali ah ayaa la dhisay guddiyadan,waxa ay guddiyadan diyaargarowgii iyo isku habaynta howsha iyo xulashada shaqsiyaadkii boosaska buuxin lahaa ayay wadaan ,”ayuu yiri Mr Xasan.
Waxa uu intaa ku daray in dadka deegaanka looga baahn yahay in ay dulqaad muujiyaan maadama sida uu sheegay aysan suuragal ahayn in dowlad lagu dhiso labo toddobaad.
” Waqti dheer ma ahan In labo toddobaad gudahood lagu dhiso dowlad heer deegaan ilaa heer tuulo , bulshado waa in ay sugto oo in loo soo socdo ay fahmaan ayaa lagama maarmaan ah howshaasi howl sahlan ma ah ,”. Ayuu intaa ku daray
Goorma ayuu adeega dowladda uu gaarayaa guud ahaan deegaanka?
Madax xafiiseedka madaxtooyada dowlad deegaanka Soomaalida Xasan Maxamed Xuseen oo ay BBC wax ka waydiisay ayaa waxa uu sheegay in ay qorshaynayaan in muddo bil ah ay dowladda cusub adeegyada ku gaarsiiso guud ahaan gobolada,degmooyiinka iyo tuulooyiinka.
” Muddo bil gudahee ah wax waliba in ay sidoodii ku soo noqdaan oo ay dowladda ilaa heer qabalo wada shaqo gaso ayaan rajaynaynaa ,”